बलिउड अभिनेत्री रेखाले सिउँदोमा सजाउने सिन्दुरको खुल्यो यस्तो रा’ज, फ्यानहरुमा छायो खुशियाली त बलिउडमा मच्चियो खैलाबैली – PathivaraOnline
Home > बलिउड > बलिउड अभिनेत्री रेखाले सिउँदोमा सजाउने सिन्दुरको खुल्यो यस्तो रा’ज, फ्यानहरुमा छायो खुशियाली त बलिउडमा मच्चियो खैलाबैली
admin October 7, 2020 October 7, 2020 बलिउड, मनोरञ्जन	0
एजेन्सी । वर्षौदेखि बलिउड अभिनेत्री रेखाले आफ्नो सिउँदोमा खुलेआम सजाउँदै आईरहेकी सिन्दुर पुरै दुनियाँकोलागी एउटा रा’जको विषय बन्दै आईरहेको थियो । तर त्यो रा’ज अब रा’ज रहेन । रेखाले आफ्नो सिउँदोमा सजाउने सिन्दुरको रा’ज अहिले आएर खुलेको छ । सायद यो उनको र उनका फ्यानहरुकोलागी पनि उचित समय भएर होला उनले आफैले यो रा’जबाट पर्दा हटाएकी छन् ।रेखाले आफ्नो सिउँदोमा सजाउने सिन्दुर कस्को होला?
साँच्चै रेखाले आफ्नो सिउँदोमा सजाउने सिन्दुर कस्को होला भनेर आँकलन गर्न त धेरै गाह्रो नभएको विषय हो । त्यै पनि मुख फोडेर भन्न धेरैले हिम्मत गर्न नसकेको विषय पनि हो । जेहोस् उनले आफ्नो सिउँदोमा निकै नै मायाले साजउने सिन्दुरको मोल भने यो संसारमा भएका सबै महंगा वस्तुहरुको मूल्यभन्दा कम चै भएन । जहिले पनि रेखा कुनै अवार्ड कार्यक्रमहरुमा जाँदाहोस या कुनै पार्टीमा जाँदा नै किननहोस् उनले आफुलाई एउटी विवाहीत नारी जस्तै बनाएर प्रस्तुत गराएकी छन् ।
कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा जब उनको उपस्थिति हुन्छ तब सबैलाई लाग्दछ कि उनी संसारकै सबै भन्दा भाग्यशाली र मायालु श्रीमती हुन् । जस्लाई उनका श्रीमानले निकै नै मायाले राखेका छन् । रेखा त्यसरी सजिएर जान्छिन् मानौं कि उनको श्रीमानले उनलाई अथाहा मायामोह र आलिशान तरिकाले राखेका छन् । जब कि यो साँचो हैन । रेखाको दुईघरबार बिग्रिएपछि उनी एक्लै बस्दै आईरहेकी छन् ।
एक्लो हुँदाहँदै पनि रेखाले आफ्नो सिउँदोमा कस्को सिन्दुर लगाउँछिन् त ? यो प्रश्नको जवाफ सबैले जान्न चाहिरहेको बेला यतिबेला उनको सिउँदोको सिन्दुरको रा’ज बाहीरिएको छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो रेखा र अमिताभ बच्चनको अधुरो प्रेम कहानीको बारेमा । यी दुई एकअर्कादेखि अलग त छन् तर पनि माया भने सधैं एकअर्कालाई नै गरिरहे । यी दुईको प्रेम कहानी आकाशमा चम्किरहने तारा जस्तै तेजीलो छ । यी दुवैले आफ्नो प्रेमलाई अमर राख्नकोलागी आ–आफ्नो तर्फबाट भूमिका सकारात्मक निभाई रहे ।
त्यसैले त आज पनि अमिताभले आफ्नो मनमा रेखालाई नै राखेका छन् भने रेखाले पनि अमिताभको प्रेमलाई आफ्नो सिउँदोमा सजाएकी छन् । अमिताभले जयालाई विवाह गरि सकेपछि रेखासंगको प्रेममा परेर रेखालाई विबाह गरेको भन्ने खबर बाहीरिएसंगै रेखाले आफ्नो सिउँदोमा सिन्दुर सजाउन थालेकी हुन् ।
एक अन्तरवार्तामा रेखाले आफ्नो सिन्दुरको राजलाई खोलेकी छन् ।
उनले सिन्दुरको विषयमा प्रश्नकर्ताले तपाईँ कसको नामको सिन्दुर लगाई रहनु हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा रेखाले मुस्कुराउँदै भनेकी छन्,‘यो त जो कसैले पनि सजिलै अनुमान लगाउन सक्छ । यो पनि कुनै सोधिन प्रश्न हो र ?’ रेखाको यही जवाफलाई बलिउडका महानायक अमिताभ बच्चनसंग जोडिएको छ । किनकी अमिताभपछि रेखाको जीवनमा अरु कुनै व्यक्तिले प्रवेश पाएन । रेखाको भनाईमा धेरैले प्रतिकृया दिएका छन् ।
रेखाका फ्यानहरुले रेखालाई महान नारीको रुपमा परिभाषित गरेका छन् । उनीहरुले रेखालाई साँचो माया गर्ने एउटा पवित्र हृदयको मान्छेको रुपमा हेरेका छन् । माया होस् त यस्तो होस् भनेर रेखालाई प्रेमको मिसालको रुपमा उभ्याएका छन् । कतिले भनेका छन् साँचो माया गर्नेहरु कहिल्यै पनि एक हुन सक्दैनन् रेखा र अमिताभ पनि तिनै मध्यका एक मायालु जोडि हुन् ।
नेपालमा आज मात्रै बढे यति धेरै संक्रमित, तथ्याङ्क हेरेपछि एकछिन चकित पर्नुहुनेछ!
प्रचण्डका नातिनीहरुको यस्तो रुची: प्रचण्डका तीन नातीनीहरुले एकै साथ गरे अर्काे खुलाशा – भिडियोमै हेर्नुस्